Mpiasam-panjakana : Manohitra ny hosoka sy ny hala-bato -
AccueilRaharaham-pirenenaMpiasam-panjakana : Manohitra ny hosoka sy ny hala-bato
Raha toa ka tsy navela niditra teo amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna ireo vahoaka mitaky ny mangarahara sy manohitra ny hala-bato sy ny fanodinkodinana ny safidim-bahoaka tamin’ny fihodianana faharoan’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika farany teo, niala moramora ireo mpitandro filaminana taorian’ny baiko azony, ary nosokafana ihany ny vavahady nahafahan’izy ireo nanatanteraka ny hetsika fanoherana ny tsy rariny omaly.
Tamin’izany indrindra no nanaovan’ny KMMR sy Legal Team, ary ireo vahoaka etsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna antso ho an’ireo mpiasam-panjakana mba hanatevin-daharana azy ireo amin’ny fanoherana ny hosoka sy halatra faobe, ary ny fanaovana kolikoly nandritra iny fifidianana fihodinana faharoa iny. Voalaza fa tsy tokony hanaiky atao fitaovana politika ho matin-tseza sy fahefana ny mpiasam-panjakana.
Notsindrian’ny Me Hanitra Razafimanantsoa hatrany fa tsy tokony hanaiky ny fisian’ny kolikoly ny mpiasam-panjakana, ary miantso azy ireo hanohitra ny tsy rariny tamin’ny tsindry sy ny fampihorohoroana nahazo azy ireo nialoha sy nandritra iny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voalohany sy fihodinana faharoa iny. Tetsy andaniny, niantso ny mpitarika fivavahana eo anivon’ny FFKM ihany koa izy ireo mba hijoro hanohitra ny tsy rariny eto amin’ny firenena.
Ankoatra izay, hihamafy ny hetsika, araka ny tapaka teny an-kianja. Hiainga isaka ny boriborintany izany ka hivondrona eo amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna. Marihina fa efa mihetsika ihany koa ny any amin’ny Faritany ho fanoherana ny hosoka sy ny hala-baton’ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina, sy ny ekipany.
HCC tsy mitanila
Ankoatra izay, tsikaritra fa nitombo ireo vahoaka teny an-toerana, ary nanomboka nafana ny fanentanana tamin’izany. Nilamina tanteraka ny fitafan’ny mpitarika avy amin’ny KMMR sy ny Legal Team tamin’ireo vahoaka marobe.
Tamin’izany indrindra no niraisan’izy ireo feo niaraka tamin’ireo mpitari-tolona ny amin’ny fiantsoana ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) tsy hitanila amin’ny fitsarana ireo voka-pifidianana isaka ny birao fandatsaham-bato sy ny fitanana an-tsoratra. Nambaran’izy ireo mpiasam-panjakana koa ireo mpikambana eo anivon’ny HCC, ka tsy tokony hanaiky ny fisian’ny hosoka. Araka izany, tsy tokony hisy ny fitanilana amin’ny fitsirihana sy fitsarana ireo fitoriana miisa 1 500 napetraky ny KMMR sy Legal Team. Ny HCC no tokony hamoaka sy hametraka ny mangarahara amin’izao kihon-dalana lalovan’ny firenena izao.
Nandeha kosa ny horakoraka teny an-toerana amin’ny tsy afaka ny hanaiky velively iny voka-pifidianana navoakan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na CENI iny izy ireo. “Mpangalatra ary mpanodinkodina safidim-bahoaka ny CENI… Mpiray petsapetsa amin’ireo fanetriben’ny firenena, ka manao izay rehetra hampandany azy fotsiny…”, hoy ny horakoraka teny an-toerana miampy fanamafisana amin’ny sora-baventy.
Araka ny efa voalazan’ny avy amin’ny mpomba ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana (K25), fa fototry ny hosoka sy hala-bato ary ny fanodinkodinana safidim-bahoka tamin’iny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa teo iny ny minisitry ny Atitany, Tianarivelo Razafimahefa.
Araka izany, nohamafisian’ny KMMR sy ny Legal Team nanoloana ireo vahoaka marobe tetsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna, na Kianjan’ny 13 Mai omaly, fa mamohehitra ny fomban’ny minisitry ny Atitany, izay tsy iza fa olon’ny Mapar ihany, nialoha sy nandritra ary taorian’iny fifidianana iny. Noho izany indrindra, mitaky ny fanasaziana tsy misy hatak’andro ny minisitra Tianarivelo Razafimahefa ny avy amin’ny KMMR sy ny Legal Team noho ny fandikan-dalàna sy fihoaram-pefy nataony. “Misy andinin-dalàna milaza ao amin’ny Lalàna famaizana fa migadra roa hatramin’ny dimy taona an-tranomaizina ny fandikan-dalàna, toa ny nataon’io minisitry ny Atitany io”, hoy i Zafilahy Stanislas, avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim).
Nambaran’ny Me Hanitra Razafimanantsoa avy amin’ny KMMR sy Legal Team fa nampiasa ny fahefany tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana isan-tokony teny anivon’ireo faritra maro teto Madagasikara ny minisitry ny Atitany, Tianarivelo Razafimahefa, nentina nampandany ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina.
Marihina fa anisan’ny mpiasam-bahoaka mitovy amin’ny mpiasam-panjakana ihany koa anefa ny minisitry ny Atitany, ka rehefa mandika lalàna dia mendrika ny hosaziana araka ny heloka vitany sy nataony.
Noho izany indrindra hoy izy ireo niray feo, miantso ny tompon’andraiki-panjakana mahefa hamoaka ny sazy henjana ho an’ny minisitry ny Atitany, izay fanetriben’ny firenena.
Tafapetraka eny Anosiala, distrikan’Ambohidratrimo ny trano vaovaon’ny SALAMA, izay ivon-toeram-pitantanana sy famatsiana fanafody ary fitaovam-pitsaboana ho an’ireo tobim-pahasalamam-panjakana eto Madagasikara. Fotodrafitrasa izay midadasika amin’ny velaran-tany 16 000 metatra toradroa, ka afaka manafatra sy mampirina ary mamatsy ...Tohiny